ज्वानो एक मसला हो । यसले खानामा सुगन्ध थप्छ । अजवाईनले खानामा स्वाद दिनुका साथै स्वास्थ्यको लागि पनि फाईदा पु¥याउँछ । ज्वानोको फूल फल तेल सबै औषधीको रुपमा प्रयोग हुन्छ । यसको फूलमै यस्तो औषधी हुन्छ की...
काठमाडौँ । सरकारले यसै वर्षबाट ‘रोटा भाइरस’ र पोलियो विरुद्वको खोप ‘एफआइपिभि’ थप्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य महाशाखा खोप शाखाका अधिकृत वसन्त श्रेष्ठले आगामी मङसिरसम्ममा दुईवट...
पाल्पा । डर र लाजका कारण वर्षौदेखि विभिन्न रोगले भित्रभित्रै ग्रसित महिलाका समस्या घुम्ती स्वास्थ्य शिविरबाट बाहिर आउन थालेका छन् । स्वास्थ्य संस्था तथा क्लिनिकमा रोगबारे बताउन लाज र डर मान्ने यहाँका ...
स्टाटस बाबा र बज्यै : यस्ता व्यक्ति जो मिनेट–मिनेटमा स्टाटस अपडेट गर्छन् । जे कुरामा पनि बीचमा बोलिहाल्नुपर्ने, आफ्नो विचार व्यक्त गरिहाल्नुपर्ने यिनीहरूको बानी हुन्छ । यिनीहरूलाई हटाउनु पर्दैन । यिनी...
सेक्स लाइफमा पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त गर्न अपनाउनुस् यी ६ तरिका…
लिङ्ग उत्तेजित नहुने समस्याले गर्दा आफ्नो पार्टनरलाई सन्तुष्टि दिननसकेकोमा कहिलेकाँही लज्जित हुनुपरेको छ ?उमेर चढ्दै गइसकेपछि पार्टनरलाई बेडमा सन्तुष्टि प्रदान गर्न अलि कठिन हुने गर्दछ । लिङ्ग उत्तेजन...
गर्भ नरहने गरी यसरी सेक्स गर्न सकिन्छ !
यौन मानवीय र जिवित प्राणीको नैसंर्गीक आवश्यकता नै हो । मानिसलाई खानपानको जरुरी भएजस्तै सेक्सको पनि उत्तिकै मात्रामा आवश्यकता पर्छ । तर सेक्सका पनि चरण र प्रक्रियाहरु हुन्छन् । विबाहिताले गर्ने सेक्स र...
- डा. राजेन्द्र भद्रा केटासँगैको यौनसम्पर्क किशोरावस्थामा विशेष गरी यौनभावना प्रबल हुनुका साथै विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षित हुने कुरा त हामीले बुझेकै छौं । धेरैजसो व्यक्तिका लागि यो कुरा यथार्थ...
काठमाडौँ । हिमाली र उच्च पहाडी छ जिल्लाका ४८ गाविस ९तत्कालीन० खाद्य असुरक्षाको उच्च जोखिममा देखिएका छन् । खाद्य सुरक्षा सञ्जालले विस्तृत अध्ययन गरी धादिङका ५, गोरखाका ११, कालिकोटका ३, मुगुका १०, हुम्...
डा. कपिलदेव उपाध्याय, वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ ‘सेक्सुअल रिलेसनसिप’को कुरा गर्दा हामी शारीरिक सम्पर्कको मात्र कुरा गर्छौं । तर, यससँग जोडिएका भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक पक्ष धेरै छन् । सेक...
यदि तपार्इं सेल्फीको सोखिन हुनुहुन्छ भने यसका लागि केही एप्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जसको माध्यमबाट तपाईंको सुन्दर सेल्फी खिँच्ने सपना पूरा हुनसक्छ। प्रिज्मा (आइओएस र एन्ड्रोइड) सेल्फीमा फरक–फरक इफे...
यौनकर्मलाई नेपाली कानुनले निषेध गरेको छ। त्यसैले यौनकर्मीको सजिलै पहिचान हुन गाह्रो छ, यहाँ। मैले बाध्यतावश यौनकर्म र यौनजन्य गतिविधिमा लागेका महिलासँग काम गर्ने निधो गरेँ। सकेसम्म उनीहरूलाई यौनजन...
भक्तपुर । उपचारका लागि आएको बिरामीको मृत्यु भएपछि भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित नागरिक सामुदायिक अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ । दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका– ५ घर भई हाल गठ्ठाघर बस्दै आएकी ३८ वर्षकी उषा बस्नेतको ...
काठमाडौँ । विश्व योग दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियामा वक्ताले योग कुनै खास धर्मसँग सम्बद्ध नभई विशुद्ध विज्ञानमा आधारित अभ्यास भएको बताएका छन् । झन्डै पाँच हजार वर्ष पुरानो योग विज्ञानलाई ...
योग किन र केका लागी ?
मानिस आफूलाई सधैँ स्वस्थ राख्न चाहन्छ । तर, जति कोसिस गरे पनि रोगले शरीरलाई छाड्ने होइन । कताबाट रोग आइलाग्छ पत्तै हुँदैन । स्वस्थ्य रहनका लागि मानिस बिहानबिहानै दौडिन्छन्, जिम लान्छन्, जिउ मर्काइमर...
भारतमा गर्भवतीले के खान हुने र के नहुने भनी एक सरकारी कार्यालयले नै जारी गरेका विज्ञापन एवम् सन्देशको विषयलाई लिएर स्वास्थ्यका विज्ञहरुबीच नै विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकारी स्वास्थ्य कार्यालय योगा र प्...
सुन्दर देखिन को नचाहला र । तर, सुन्दर र चम्किलो छाला भन्नेवित्तिकै कहाँ बनाउन सकिन्छ र । अझ अनुहारमा आउने अत्याधिक डन्डीफोरले त अनुहारलाई कुरुप नै बनाइदिन्छ । सुन्दर मुहारलाई कुरुप बनाउने डन्डिफोरला...
प्रविधिलगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धाले हाम्रो जीवनशैली अत्यधिक तनावपूर्ण बन्दै गएको छ । हुन त विश्वभर बर्सेनि मार्च २० मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसन्नता दिवस (इन्टरनेसनल ह्याप्पिनेस डे) मना...
चितवन । माग बढ्दै गए पनि रक्तदाताको सङ्ख्या नबढ्दा बर्सेनि रगतको अभाव बढ्दै गएको छ । युवा समुदायमा रक्तदानको महत्व बुझाउन नसक्नाले पनि बर्सेनि गर्मी मौसममा रगतको पूर्ति हुन कठिन हुँदैआएको हो । नेपाल ...
महिनावारी महिलाहरुको शरीरमा हुने नियमित जैविक प्रक्रिया हो । तर यो विषयमा थरिथरिका विचारहरु पाइन्छन् । परम्परागत हिन्दू धार्मिक मान्यताले महिनवारीको समयलाई अछूतका रुपमा व्यवहार गर्दछ । हिन्दूहरुका अ...
काठमाडौँ । क्यान्सरको उपचार सेवा र शुल्कमा एकरुपता कायम गर्न तथा सस्तो बनाउन सरकारले ‘क्यान्सर प्रोटोकल’ लागु गरेको छ । प्रोटोकलमा १७ प्रकारका क्यान्सरको उपचारका लागि छुट्टा छुट्टै शुल्कको व्यवस्था ग...